ဒပ်ဘ်နီယမ် ← ဆီဘော်ဂျီယမ် → ဘိုဟ်ရီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဆီဘော်ဂျီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
ဆီဘော်ဂျီယမ် (Seaborgium) ဒြပ်စင်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်တခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဓာတ်ခွဲခန်း၌သာ ဖန်တီးထုတ်ယူ ရရှိ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ဖြစ်တည်လာပုံကို သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း silver ကဲ့သို့အဖြူရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုရောင်ရှိသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Sg ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၀၆ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အတည်ငြိမ်ဆုံး အိုင်ဆိုတုပ် အမှတ်စဉ်မှာ 271Sg ဖြစ်၍ သက်တမ်းဝက်(half-life) မှာ ၂.၄ မိနစ်ဖြစ်သည်။ Seaborgium ဒြပ်စင်အမည်သည် ၎င်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အမေရိကန်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Glenn T.Seaborg ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်သိရှိရသော သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရ ၎င်းဒြပ်စင်သည် အုပ်စု (၆) ရှိဒြပ်စင်များကဲ့သို့ ဓာတ်တိုးခြင်းအခြေအနေကိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းအခြေအနေမှ SgO2Cl2 ဒြပ်ပေါင်း နှင့် SgO42- ကဲ့သို့သောဓာတုဗေဒဒြပ်ပေါင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Hoffman၊ Darleane C.; Lee၊ Diana M.; Pershina၊ Valeria (2006)။ "Transactinides and the future elements"။ in Morss; Edelstein၊ Norman M.; Fuger၊ Jean (eds.)။ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.)။ Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media။ ISBN 1-4020-3555-1။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆီဘော်ဂျီယမ်&oldid=722891" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။